अजोड इन्स्योरेन्सको नाफा बढ्यो - Wnepal.com
अजोड इन्स्योरेन्सको नाफा बढ्यो
शुक्रबार, बैशाख २६, २०७७
अजोड इन्स्योरेन्सले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. ३ करोड ५१ लाख खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको यसै अवधिसमम रू. २ करोड ६० लाख थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको नाफा ३५ प्रतिशत बढी भएको हो ।
बुधवार सार्वजनिक भएको कम्पनीको वित्तीय विवरण अनुसार यस वर्ष रू. ६० करोड ६३ लाख कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको तेस्रो त्रैमासभन्दा यस वर्ष कम्पनीले १४२ प्रतिशत बढी बीमाशुल्क आर्जन गरेको हो । गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू. २५ करोड ४ लाखमात्र बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो ।
बीमाशुल्क आर्जन बढ्दै गएकाले आगामी दिनहरुमा व्यवासायिक विविधिकरण गरी गुणस्तरिय ग्राहकमुखी नयाँ सुविधा शुरू गरी अझ वित्तीय रूपमा सबल बनाउने योजना कम्पनीको रहेको छ । हाल रू. ७० करोड चुक्तापूँजी रहेको यस कम्पनीले बीमा समितिबाट रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी कायम गर्न सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने गरी स्वीकृति पाएको हो । २०७५ असार २१ गतेदेखि यस कम्पनीले औपचारिक रुपमा कारोबार शुरु गरेको हो ।
नयाँ निर्जिवन बीमा कम्पनीको रुपमा सञ्चालित यस कम्पनीमा तेस्रो त्रैमाससम्म ७० हजार ४०० बीमालेख कायम रहेको छ । यस अवधिसम्म कम्पनीले २ हजार ३६८ बीमालेख नबिकरण गरेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीले ५१ प्रतिशत बढी दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म १२० जनालाई रू. ११ करोड ३ लाख दाबी भुक्तानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष १ हजार ५६८ जनालाई रू. १६ करोड ६८ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
कुखुरा व्यवसायीलाई अनुदान
महालक्ष्मी विकास बैंकका कर्मचारीको लागि कोरोनाभाइरस बीमा
महालक्ष्मी लाइफको खुद नाफा साढे ६ करोड बढी
नेपाल लाइफको निरन्तर छलाङ
नेपाल इन्स्योरेन्सको खुद नाफा बढ्यो,
नेपाल लाइफको २० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ८ लाख ४७ हजार बराबरको सहयोग